[Shanghai Zhonglixun B&B] I-tatami yesitayela saseJapan/Disney yamahhala - I-Airbnb
[Shanghai Zhonglixun B&B] I-tatami yesitayela saseJapan/Disney yamahhala
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-丽红
U-丽红 Ungumbungazi ovelele
Itholakala eduze ne-Shanghai Disneyland, ungakwazi ukuzwa ubuhle be-Shanghai. Wamukelekile ukuthi uhlale endaweni enengqondo, enethezekile nefudumele. Kunezindawo ezihlukahlukene ezikahle eduze. Izitolo, izitolo ezinkulu, izimakethe zemifino, nezindawo zokudlela ezihlukahlukene zilungele ukudla. igceke ungeze umndeni izoso umsebenzi wokwakha, okwasetshenziswa kuyajabulisa futhi bajabule. Barbecue, ephelele izindlu izindawo, zokugeza ephelele, izindlu kungaba njengokungathi sijabulela indawo enhle egcekeni, imvelo muhle, ephephile, futhi elula ukuvakashela ezikhangayo ezungezile.
Uma uneminye imibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nomnikazi wendawo, sizokuthinta, futhi sizozama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo zakho ngesikhathi sokuhlala kwakho.
I-Zhonglixun B&B inegceke elikhulu, eligcwele izimbali, izitshalo, amaswingi, iziteshi zokoso inyama, nezindawo zokupaka zamahhala...
Kukhona lula izindawo ezahlukene endaweni ezungezile. Izitolo zokudla okulula, nezitolo ezinkulu, izimakethe yemifino, nezindawo zokudlela ezihlukahlukene emkhathini kunemishini engu esilungele yokudlela. Igceke ungeze iphrojekthi izoso emikhaya. Egumbini lokuphumula kukunikeza isikhala yokuzijabulisa futhi ngisebenza. Ungajabulela Ge You kusofa Amafasitela amakhulu asuka phansi kuye ophahleni angajabulela ukubuka okubanzi nokushisa kwelanga okufudumele. Indawo ezungezile yinhle futhi iphephile, futhi kulula ukuya ezindaweni ezikhangayo ezizungezile.
Xhumana futhi uxhumane noma nini, noma kuphi
U丽红 Ungumbungazi ovelele